Govt Claims to Have Created 18,352 Jobs in June - TDBN
Home ASIA MYANMAR (EX-BURMA) Govt Claims to Have Created 18,352 Jobs in June
The Ministry of Labour, Immigration and Population said that both public and private sectors created 18,352 jobs in June this year across the country.
The government employed 733 people while the private sector employed 17,619 workers in June across the country.
Job creation across the country was around 6,000 jobs in May and 9,300 in April. In March, over 24,000 people were employed locally and over 15,000 were employed overseas. The country created 26,000 jobs for people while over 27,000 people went overseas to work in February while 24,000 people get jobs in the country and 29,000 people got overseas jobs in January.
ဇွန်လ အတွင်းပြည်တွင်း ၌ အစိုးရအလုပ်အကိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိက အလုပ်အကိုင်စုစုပေါင်း ၁၈၃၅၂ ရှိကြောင်း အလုပ်သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာ မှ သိရသည်။
မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရရှိရေးနှင့် သင့်တော်ကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင်များရရှိရေးအလုပ်ရှင်များက အလုပ်သမားအလုံ အလောက် ခန့်ထားနိုင် ရေးတို့အတွက် အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သမားရှာဖွေ ရေး ရုံးများတွင် Labour Exchange Managment System ဖြင့် Online မှဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။
ဇွန်လအတွင်း ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အလိုက် အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု အခြေအနေမှာ အစိုးရအလုပ်အကိုင် ရရှိသူ ၇၃၃ ဦး ပုဂ္ဂလိက အလုပ်အကိုင် ရရှိသူ ၁၇၆၁၉ ဦးရှိခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ အတွင်း ပြည်တွင်း အလုပ်နေရာ ၆၀၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင် ခဲ့ပြီးဧပြီ လ အတွင်း ၉၃၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင်သည်။
မတ်လအတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၁၅၀၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်း အလုပ်နေရာ ၂၄၀၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့ကာဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက် လုပ်ကိုင်သူ ၂၇၀၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်း အလုပ်နေရာ ၂၆၀၀၀ ကျော်အား ခန့်ထားနိုင်ခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီလအတွင်း ပြည်ပသို့တရားဝင် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ ၂၉၀၀၀ ကျော်နှင့် ပြည်တွင်းအလုပ်နေရာ ၂၄၀၀၀ ကျော်အားခန့်ထားနိုင်ခဲ့ကြောင်းအလုပ်သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာ မှ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အထည်ချုပ်စက်ရုံပေါင်း ၆၀၀ နီးပါးခန့်ရှိပြီး ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် အထည်ချုပ်စက်ရုံ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် စီးပွားရေးအရ ထိခိုက်နစ်နာ ဆုံးရှုံးမှုများရှိကာ မတ်လနှောင်းပိုင်းတွင် စက်ရုံပေါင်း ၄၀ ကျော်မှ အလုပ် သမားပေါင်း ၂၅၀၀၀ ခန့် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရသည်။
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင်လက်ရှိအခြေအနေရ ဟိုများပိတ်သိမ်းရမည်ဆိုပါ လုပ်ငန်းတွေက တိုက်ရိုက် အလုပ်ပေးထားသူ ၇သောင်းခွဲခန့်နှင့် ဆက်စပ် အလုပ်အကိုင် ရသူ ၇သောင်းခွဲခန့် ပေါင်း ၁သိန်းခွဲနှင့် ၄င်းတို့ရဲ့ မှီခိုမိသားစုများအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိနေသည်။
Previous articleQantas puts international bookings onhold until 2021
Next articleRussia Arrests Disabled ‘Soviet Citizen’ Suspected of Plotting Coup
නගරාධිපති වරදකරුනම් දඬුවම් දීම වෙනුවෙන් නීතිඥ උදය ගම්මන්පිල පෙනී සිටී
Elections and Court Action. – The St Kitts Nevis Observer
Activists Allege Cover-Up as Toxic Siberian Fuel Spill Reaches Arctic Ocean...
PIT-CNT expresó su más enérgico repudio ante agresiónatrabajador rural
“Zoom – powered by Vodafone”, the newest content platform launched...
Doing Business in Myanmar | Myanmar Business Today
In the Time of Crisis, Protect Your Valuable Assets-People